#Etazonia: “Mijoro eo akaikin’ny vahoaka #Malagasy hatrany” | mandimby maharo
#Etazonia: “Mijoro eo akaikin’ny vahoaka #Malagasy hatrany”	Posted on 4 July 20135 July 2013 by Mandimby Maharo	Teo an-tokotany malalaky ny masoivohony no nandraisan’ny Etazonia ireo vahininy. Nahofahofan’ny rivotra malefaka ireo saina 51 n’ireo fanjakana mandafitra ity firenena federaly ity. Nirentiranty koa ireo takelaka lehibe mampiseho ireo asa sahanin’izy ireo eto Madagasikaza. Eo koa ireo tranoheva nisy ireo orinasa miasa miasa na mivarotra ny voketra amerikana eto. Ny amboaram-peo ny tanora sy ny feon-kira nentina nandrotsirotsina ireto vahiny ireto dia mampatsiahy ireny horonan-tsary amerikana. Hira sy feon-kiran’ireo mpanakanto fata-daza. Ireo rehetra ireo dia natao hitondrana ireto vahiny ireto haka sary an-tsaina fa toy ny any Etazonia izy ireo na dia eto Madagasikara ihany aza. Nanjaka ny loko fotsy, mena ary manga sy ny famirapiratan’ireo haingo. Ireo vahiny rahateo, voasariky ny fanentanana angamba, toa lasa niteny amerikana avokoa. Vahiny izay avy amin’ny lafy valon’ny tany: ao ireo masoivoho avy amin’ny firenena hafa, ireo mpiasa eny anivon’ireny sampandraharaha iraisampirenena ireny, ary ireomalagasy. Ireto farany izay nahitana ireo mpandraharaha, mpanao politika, kandida isan-tsokajiny, mpanakantosy olo-malaza…
“…toy ireo mpiara-miombon’antoka hafa ao anatin’ny Groupe de Contact International ho an’i Madagasikara, ny tanjon’i Etazonia dia ny hitsaharan’ny olana ara-politika sy ara-toe-karena izay nandrava ity firenena ity hatramin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009. Ny hany làlana ivoahana amin’izany dia ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary mangarahara, araka ny vinavina ao amin’ny Tondrozotra tohanan’ny SADC.” Izay no nolazain’ny mpiandraiki-draharaha Amerikana, Andriamatoe Eric Wong, nandritra ny fankalazana ny faha 237 nyfetim-pirenena Amerikana omaly 03 jolay teny Andranomena. Fanamarihana izay naroso mialoha mba afahan’ireo teratany amerikana monina eto MAdagasikara izany any antokatranony tsirairay avy anio. Fanasana izay nahavorin’ireo olo-manan-kaja vahiny sy malagasy. Taorian’ny firedonana ny hiram-pirenena amerikana sy malagasy dia niroso tamin’ny kabary fiarahabana ny mpampiatrano.
Ny hafatra avy amin’ny filoha Obama amin’izao fety ny Etazonia izao no novakiny mialoha. Nasian’ity diplaomaty ity resaka manokana ny fototra ijoroan’ny fanjakana Amerikana. Ny governananta hoy izy “dia governemanta avy ao amin’ny vahoaka, najoron’ny vahoaka sady miasa ho an’ny vahoaka” Izany no nametrahan’ireo ray mpanorina ny teny hoe “Izahay Vahoaka ” eo amin’ny fanombohan’ny lelem-panorenananay. ?iaro soa toavina iombonana ny vahoaka amerikana, “Anisan’izany ny fiankinana amin’ny tanjaky ny demokrasia sy ny lamina demokratika; fiankinana amin’ireo zon’olombelona fototra; ary fiankinana amin’ny fitovian’ny rehetra manoloana ny lalàna.”
Nasiny resaka avy eo ny fifandraisan’ny firenena malagasy sy amerikana: manaraka akaiky ny toe-draharaha politika eto Madagasikara i Etazonia. Etsy an-daniny koa dia mbola vonona ny hiara-dia sy hanohana ny ara toekarena sy ara sosialy koa izy ireo satria “Mino izahay fa ilaina ny mampiasa vola ho an’ny mponina eto amin’ity firenena ity, ka mba ho ny Malagasy no hanapa-kevitra ny amin’izay ho endriky ny ho aviny”
Mazava ho azy fa nanindry teny momba ny fifidianana koa ity mpandraiki-draharaha ity. Notanisainy ny hevitry Etazonia momba izany fifidianana eto Madagasikara izany:
– Raha tiana hahomby ny fifidianana, ankoatry ny fanomanana ara-teknika dia tokony hisy tontolo ara-politika ahitana fanajana ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra sy famoriana olona, ahitana mpanao gazety afaka mampita vaovao ka tsy hatahotra sazy, ary ahitana manam-pahefana manabe voho ny zon’olombelona sy ny fanjakana tsara tantana.
– Ny disadisa ara-politika miverina lava eto Madagasikara dia matetika vokatry ny fifidianana tsy eken’ireo mpandray anjara misongadina nefa nahatsapa voailikilika tao anatin’izany. Noho izany dia tohanan’i Etazonia ny rafi-pifidianana izay manaiky ny fandraisana anjaran’izay mpirotsaka hofidiana rehetra mahafeno ara-dalàna sy ara-drariny ny fepetra takian’ny lalàna manan-kery eto Madagasikara, ary mifanaraka amin’ny vontoatiny sy ny hevitra nandrafetana ny Tondrozotra tohanan’ny SADC
– Tsy i Etazonia mihitsy no hitsara mialoha izay ho vokatry ny fifidianana. Tohananay ny zon’ny vahoaka Malagasy hifidy ny mpitondra azy ao anatin’ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary azo ekena; ary tohananay ny ezaka ataon’ny SADC hahitana vahaolana azo itokisana sady mampandray anjara ny rehetra hamahana ny olana ara- politika eto Madagasikara.
Nandritry ny resaka nataon’Andriamatoa Eric Wong tamin’ireo mpanao gazety moa no nilazany fa manantena ny hanatanterahana an-tsakany sy an-davany ny tondrozotra i Etazonia. “Ekena fa tsy lavorary io tondrozotra io saingy raha misy ny fandavan-tena avy amin’ny mpanao politika sy misy fampandraisana anjara bebe kokoa ny vahoaka dia ho tafavoaka amin’izao krizy izao ny malagasy.” Valinteny mikasika ny fanakanana ny filoha teo aloha tsy hiverina eto an-tanindrazany io. “Tohananay avokoa izay rehetra manana fandavan-tena hitady vahaolana ka mahafeno io fepetra ny fampandraisana anjara ny rehetra io” hoy izy raha nanontanina ny momba ny fampanatonana ataon’ny Ffkm.
Tags: Eric Wong, Etazonia, Madagasikara, Malagasy, politiqueCategories: politique, Uncategorized